'Furiosa,' 'Mad Max' Kuisirwa, Gadzirira Kutanga Kufirimu muNew South Wales
musha Horror Varaidzo Nhau 'Furiosa,' 'Mad Max' Kuisirwa, Gadzirira Kutanga Kufirimu muNew South Wales
by Waylon Jordan April 19, 2021 1,385 maonero
Kushatirwa, Idzva Mad Max firimu uye yekutanga nyaya yemunhu ane mukurumbira kubva Mad Max: Fury Road, iri mukugadzirira kwekupedzisira kutanga kutora mafirimu muNew South Wales, Australia. Iyi firimu ichave iri hombe pane yakamboitwa muAustralia
Anya Taylor-Mufaro (The New Mutants, The Witch) achatora chinzvimbo che titular chakatarisana naChris Hemsworth (Thor: Ragnarok). Hemsworth akaonekwa nemugadziri wezvekutengesa George Miller mumusangano wevatori venhau nhasi kuti ataure nezvehurongwa hweprojekti iyo ichagadzirirwa kuburitswa muna Chikumi 23, 2023.
Iyi firimu inonzi ichaisa mari inosvika mamirioni mazana matatu emadhora mazana matatu emadhora munzvimbo iyi uye inogadzira kumwe kunhu kwemabasa mazana masere nemakumi mashanu.
Mad Max: Fury Road yaive stellar firimu iyo yakawana pamusoro pe $ 370 mamirioni pasirese, uye ichi chinotarisirwa kwazvo chitsauko chinotevera chaigona nyore kuita izvo nezvimwe. Charlize Theron saImperator Furiosa anga ari mumwe weanomira-kunze vatambi veiyo firimu, uye zvichave zvinonakidza kudzidza kwake backstory.
Mutungamiriri akataura mudzvinyiriri kuti kugadzikana paWarner Bros. kwave kuri kiyi kufambira mberi kweprojekti.
“Kubva zvatakatanga Fury Road Ndinofunga pave nehurumende nhanhatu dzakasiyana kuWarner Bros, ”akadaro. "Iye zvino yakadzikama zvakanyanya uye ivo vanokwanisa kunyatsoteerera zvakabatana kumafirimu avanoda kugadzira uye iyi ndeimwe yadzo."
Wagadzirira here chimwe chitsauko mu Mad Max saga? Unoda kudzidza zvakawanda nezve Kushatirwa? Gara wakatarisana neHorror kune ese achangoburwa nhau sezvo zvave kuwanikwa!